Ngakho-ke kudlule umzuzu ojabulisayo, lapho usuqala, waba umndeni. Umkhosi wokuqala womshado ubizwa ngokuthi umshado we-calico. Leli gama lifanekisela kakhulu, kusukela emva konyaka wokuqala wokuphila okuhlangene ubudlelwane phakathi komndeni phakathi kwalabo abashade namanje buncane kakhulu futhi bunobuthakathaka futhi bungabhidlizwa isenzo esingenandaba noma igama.
Abangane abaseduze nabazali baqala ukucabanga kusengaphambili ukuthi yini okufanele banikeze umkhosi womshado ongu-1 wabashadile abasha.
Ngokwesiko, ngalolu suku olubalulekile, kuwumkhuba wokwenza i-pripodnosit noma yimaphi ama-linens noma izinto ezisuka ku-chintz. Kungaba embhedeni wokulala, ama-cotton impints, ama-napkins, amakhethini amafasitela, imithwalo. Uma ufuna ukuphuma, kodwa ungazi ngokuqondile ukuthi uzowunikela yini isikhumbuzo sonyaka ongu-1, bese ufaka ucabange futhi usebenzise izipho ezinjalo ezibonakala sengathi zilula. Funa imithwalo yesimo esingavamile, isibonelo ngesimo senhliziyo ezimbili, ama-cubs amabili, noma ngobhaliso obumnene "Umyeni nomfazi", "UMkhandlu nothando," njll. Umqondo omuhle kubalandeli ukuba bafeze: ngemikhiqizo elula ekwazi ukufaka imidwebo emihle noma imidwebo ngokwakho. Isipho esenziwe ngesandla ngezandla zayo siyoba kubi kakhulu kubantu abasha futhi siyobe sinekhophi eyodwa kuphela.
Uninazala kaningi uzibuza ukuthi yini okufanele ayinike indodana yakhe ethandekayo nomalokazana wakhe ngomkhosi wokugubha umshado. Sekuyisikhathi eside isiko ukuthi umamazala kufanele alethe izingubo ezinhle zokugqoka njengesipho kumalokazana wakhe. Uma ungumhlengikazi, kuyakuba okungavamile kakhulu uma wenza lokhu kugqoke ngokwakho. Vele ubheke kumagazini bese ukhetha imodeli yokugqoka kaningi kakhulu, ukuze umalokazana angayifaka futhi aphumule indlu. Ezimweni ezimbi kakhulu, ingubo ingathengwa esitolo. Futhi yini okufanele inikeze ngesikhumbuzo sonyaka womshado ongu-1 kusukela kubazali bomakoti? Khumbula ukuthi izingane zakho zingumndeni, futhi zibophezelekile ukusizana emsebenzini ojikeleze indlu, kuhlanganise ekhishini. Banike ama-aprons amabili efana nekhishi ngezinkomba ezithakazelisayo: "Prince - Princess", "Bathandekayo - Bathandekayo", "Muntu - Umfazi". Bangakwazi futhi ukuthungwa ngokwabo noma ukuthenga izipho ezingavamile esitolo.
Izipho zokugubha umshado womnyaka ongu-1 azikwenziwa kuphela nge-chintz. Isipho sokuqala sizoba isithombe esibonisa umbhangqwana osemusha. Khetha isithombe esihle salabo abasanda kushada - kungaba noma yisiphi isithombe esihlangene - bese usiletha kumculi ochwepheshe. Mane unakekele ukuthola umculi bese ukhetha isithombe kusengaphambili, ngoba umsebenzi womculi uzothatha isikhathi (kusukela ezinsukwini ezimbalwa kuya enyangeni).
Yiqiniso, abashade ngokwabo, ngokusondela kosuku lokuqala olubaluleke kakhulu, banombuzo obukhali: "Yini okufanele banikezwe omunye umcimbi wokugubha umshado?". Umfazi osemusha anganika ihembe, ishidi nge-lettering yokuthanda noma akhethe umbala ozithandayo wombhede womyeni wakhe ngomdwebo omuhle wombili: izithandani ezimbili zezingelosi, ingonyama nengonyamakazi, noma mhlawumbe ama-tigers amabili anamaqabunga njengento eqondile yokuqhubeka kohlobo. Indoda ingayinika ingubo yakhe yasekhaya ethandekayo noma ithawula ngencwadi yokuthandana. Ama-Sweetshoppers azothanda ngempela ibhokisi lamaswidi okuthandayo ahlanganiswe nge-cotton gauze, isibonelo isibhande. Isidlo sothando, esembethe indwangu entsha yetafula, kuyoba ukuphela okufanele kulo mkhosi ohlangene ohlangene.
Ngakho-ke, umbuzo walokho okumele unikeze umkhosi womshado iminyaka engu- 1, ngeke usabahlupha.
Abazali Alamu: iminyaka emingaki yayibizwa ngokuthi abafana ikhanda
Ukudla Hypoallergenic for namakati Biomill